Semalt: Ny sekreteran'ny hackers tsy tian'izy ireo ho fantatrao
Ny sehatra fampahalalam-baovao sy teknolojia dia misy karazany maro. Ohatra,Betsaka ny orinasa no manaiky ny fomba fiasa e-commerce, iray izay mitaky ny fametrahana tranokala sy bilaogy hanamafisana ny fampielezan-keviny.Misy fitaovana vaovao maro, izay mitarika ny olona amin'ny alalan'ny dingana sarotra amin'ny famoronana tranokala. Ao amin'io fepetra io, ireo fitaovana miaraka amin'nyMihamaro ihany koa ny fampiasana ny hacker satria mihatsara kokoa sy tsaratsara kokoa. Ny hackers dia misintona ny fampahalalana manokana sy ny marofampahalalana hafa, izay mety ho sarobidy.
Afaka manakatona vohikala iray izy ireo ary manalavitra vaovao toy ny carte de créditfampahalalana sy fampahalalana mahasoa hafa - enviar archivo adjunto con mail php. Vokatr'izany, tokony hitandrina ireo olona ireo ny fanafihana miaraka amin'ireo zavatra hafa mety hitrangamisy hacker afaka manao. Olona maro no manontany tena hoe ahoana no fomba hanatanterahan'ny mpikomy amin'ny fitrandrahana azy ireo. Ho an'ny iray mba hisorohana ny hackersary tafavoaka velona amin'ny fanandramana hack, mila mahafantatra ny hackers ny tranonkala.
Ny sasantsasany sy ny fomba amam-panao sasany dia ao amin'ity torolalana ity, voaomanaFrank Abagnale, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services.
Ity fanafihana ity dia manaparitaka an-tserasera manaparitaka vohikala miboridanany antontan-taratasiny. Ity hack ity dia mangalatra fampahalalana manokana toy ny carte de crédit, usernames, ary ny tenimiafina. Ny SQL Injection no mitranga manokanafitaovana, izay afaka mamaky ny karazam-pizarazara momba ny mpanjifan-tserasera sy ny scoop. Ity fomba ity dia ahafahan'ny hacker hanova angona, hampiakaranana mandefitra rakitra avy amin'ny rakitra amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana.
Ity fanafihana ity dia midika ho fampiasana endri-tsoratra fampidiran-tsoratraamin'ny tranonkala iray. Ity fanafihana ity dia mitaky ny fametrahana ilay niharam-boina amin'ny rohy na rakitra hafahafa. Vokatr'izany, ny rakitsoratra dia manasongadina ny navigateur. Ny hackerny fahazoana fidirana toy ny cache, ary koa ny tenimiafina ho an'ny tranonkala. Azonao atao ny manakana ity fanafihana ity amin'ny alàlan'ny famenoana ny vaovaotoy ny fampidirana ny rafitra famaritana faharoa rehefa mandeha ny fampahalalana eo amin'ny mpampiasa iray sy ny mpizara.
Fanairana sy fanalam-baraka.
Ireo tranonkala an-tserasera, izay afaka mamitaka ny mpampiasa amin'ny fanomezanafanangonana antontan-kevitra ao anaty pejy sandoka. Ny fampahalalan'ny mpampiasa iray dia mety ho manan-danja amin'ny fiarovana ny rafitra angona. Ho an'ny fanafihana tranga,Ny mpampiasa dia mahita tahirin-kevitra sarobidy toy ny tenimiafina ary ny fidirana amin'ny tranokala iray. Ny tranga sasany amin'io fanafihana io dia mitarika amin'ny fametrahana ny endriky ny atranonkala amin'ny milina fikarohana izay mahatonga fahavoazana lehibe ho an'ny orinasa.
Ny fanafihan'ny Middle-Man.
Ny aterineto dia mikasika ny fifanakalozam-baovao. Ao amin'ny tranokala, aNy mpampiasa dia mandefa sy mandray ny angona avy amin'ny lohamilina na ny angona. Raha mihetsiketsika ny angon-drakitra dia misy ny vulnerability, izay mitranga any amin'ny dingana rehetradingana. Ny atidoha dia manenjika ny saininy amin'ny fangalarana ity vaovao ity, ka mety hitarika amin'ny famoahana vaovao momba ny orinasa.
Namono vola an-tapitrisany tamin'ny alalan'ny hosoka sy fitaovana hafa ny hackers. Maro no mahatonga azymety ho very ary mety hiteraka olana sy ahiahy ho an'ireo niharan-doza. Maro ireo endrika fanafihana hack no mahomby noho ireo fahalemena maro izaydia amin'ny ankamaroan'ny rafitra mahazatra. Ilaina ny manana fahalalana ampy momba ireo fanafihana ireo. Ny fiarovana ny tranokalanao sy ny anaoNy mpanjifa dia miankina amin'ny fahombiazan'ny fepetra toy izany. Azonao atao ny mianatra hoe ahoana no ahombiazan'ny mpisandoka amin'ny fampiasana ity torolàlana ity.